သက်ဝေ: 2011 Blog Day အမှတ်တရ
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! August 31, 2011 at 4:22 PM
Happy blog day ပါမမ :)
သက်တန့်ချို August 31, 2011 at 4:35 PM
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဘလော့ဆက်မရေးဖြစ်တဲ့သူတွေလည်းအဆင်ပြေတဲ့အခါဆက်ရေးကြပါလို့ ၀ိုင်းပြီးတိုက်တွန်းသွားပါတယ်ခင်ဗျား)
မိုးငွေ့...... August 31, 2011 at 4:46 PM
ချစ်ခင်တဲ့ ဒီမောင်နှမတွေနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စွာ ဘလော့ဂင်းနိုင်ပါစေ မမသက်ဝေ...။ အကြွေးကျန်သေးတယ် လာဆပ်မယ်နော် ခဏလေးစောင့်...။
Evy August 31, 2011 at 5:04 PM
Happy blog day ပါ တီတီသက်ဝေ :D :D
သက်တမ်းတစ်ဝက်ရောက်ခါနီးမို့လားမသိဘူး အဲဒါတွေတော်တော်များများတူတယ် :D
မြသွေးနီ August 31, 2011 at 5:27 PM
မြသွေးက အစ်မသက်ဝေရဲ့ အက်ဆေးလေးတွေ နှစ်သက် သဘောကျခဲ့ရသူပါ..။ စာတွေ အရှိန်အဟုန်မပျက် စိတ်ချမ်းသာ၊ ကိုယ်ကျန်းမာစွာ အများကြီး ရေးနိုင်ပါစေလို့ Blog Day မှာ ဆုမွန်ချွေခဲ့ပါရစေအစ်မရေ..။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) August 31, 2011 at 5:38 PM
စာရေးကာစမှာ ဘလော်ဂါတစ်ဦးက ပြောတယ်
ဒါနဲ့ အစမ်ဘလောဂ့်လေးဆီရောက်လာပြီး စာတွေ ရှာဖတ်ဖြစ်တယ် တကယ်လဲ သူပြောတာ မလွန်ပါဘူး
ပြီးတော့ စကားလုံးလေးတွေ သေသေချာချာ ရွေးချယ်သုံးစွဲပြီး ဝေါဟာရ ကြွယ်ဝတာကိုလည်း သတိထားခဲ့မိတယ်
ပျော်ရွှင်ပါသော ဘလောဂ့်ဒေးဖြစ်ပါစေ အစ်မသက်ဝေ။
Thandar Lwin August 31, 2011 at 5:41 PM
ရေးတတ်လိုက်တာ မမရယ် တကဲ့ကို အဲဒီအတိုင်းပါဘဲ ။
မမသက်ဝေ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာစွာဖြင့် စာတွေအများကြီးဆက်ရေးနိုင်ပါစေ ။
မမ ရဲ့ ဂျာနယ် မဂ္ဂဇင်းတွေက ၀တ္ထုလေးတွေအတွက် Congrat! ပါနော်။
မမ မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ ဘလော့လေးမှာ2ခုလောက်က ရောက်ဖူးသေးဘူး။ သွားကြည့်လိုက်ဦးမယ်။
Nyi Linn Thit August 31, 2011 at 5:55 PM
ဟုတ်တယ်ဗျာ..၊ stress တွေ များလွန်းတဲ့၊ စံချိန်စံညွှန်းတွေ၊ တောင်းဆိုမှုတွေ များသထက် များလာနေတဲ့ လောကကြီးထဲမှာ ဘလော့ဂ်ရပ်ဝန်းထဲ က အပြန်အလှန် အားပေး၊ နှုတ်ဆက်သံတွေက အမောပြေစေတာ အမှန်ပါပဲ..၊ မသက်ဝေလည်း အကြည်ဓါတ်ကလေးတွေ မကြာခဏ ယိုစီးပြီး အက်ဆေးတွေကို အများကြီး ရေးနိုင်ပါစေဗျာ...။
ကိုအောင်(ပျူနိုင်ငံ) August 31, 2011 at 7:56 PM
ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ ဘလော့ဒေးမှာ ပျော်ရွှင်စရာ တက်ဂ်ပို့စ်ကို ရေးပေးတဲ့ အမ မသက်ဝေ၊ အသက် ထောင်ကျော် သောင်းကျော် ရှည်ပါစေ ... :P
SHWE ZIN U August 31, 2011 at 7:58 PM
Happy blog day ပါ
ပန်းချီ August 31, 2011 at 9:48 PM
ပျော်ရွှင်သောဘလော့ဂ်နေ့လေးဖြစ်ပါစေနော်။ ဘလော့ဂ်မှ မောင်နှစ်မများစွာနဲ့အတူ နှစ်ပေါင်းများစွာဘလော့ဂ်ဂင်းနိုင်ပါစေရှင်...။
စာအရေးညက်ညောလွန်းတဲ့ မမသက်ဝေကို ကျေးဇူးကုဋေကဋာမကတင်ပါတယ်။
ဇွန်မိုးစက် August 31, 2011 at 10:51 PM
ညိုလေးတော့ နောက်တစ်ခါ ဂဏန်းဟင်းချက်ရင် မျက်ခုံးကြိုလှုပ်နေမလား မသိဘူး... ဟိ။
မရေ...အက်ဆေးလေးတွေ ထပ်ရေးပါဦးနော်။ ဖတ်လို့ကောင်းလွန်းလို့...။ ဟိုတစ်ခါ ကတ်ကြေးလိုမျိုး...သက်မဲ့အရာဝတ္တုတစ်ခုခုကို အကြောင်းပြုပြီးတော့လေ။
ဟက်ပီးဘလော့ဂ်ဒေးနော် မမ။း)
အိမ့်ချမ်းမြေ့ August 31, 2011 at 11:49 PM
ပျော်ရွှင်သော ဘလောဂ်နေ့ပါရှင်..း))
သဒ္ဓါလှိုင်း September 1, 2011 at 1:31 AM
Happy Blog Day ပါမမသက်ဝေ..
ဘလော့ဒေးအမှတ်တရအဖြစ် စိတ်ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ ဆက်လက်ရေးသားနိုင်ပါစေ။
Hmoo September 1, 2011 at 7:48 AM
...Cheers !!! :)
mstint September 1, 2011 at 11:21 AM
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ဘလော့ဂ်ဒေးပါနော်။ အခွင့်အခါပေးတိုင်း စာကောင်းပေမွန်လေးတွေကို ဆက်လက်ရေးသား မျှဝေနိုင်ပါစေလို့ တောင်းဆုချွေခဲ့ပါတယ်။
မဒမ်ကိုး September 2, 2011 at 9:32 AM
ညိမ်းနိုင် September 2, 2011 at 6:44 PM
အစ်မရေ.....၃၁ရက်နေ့က ကျွန်တော့် ဆီမှာ လင့်တွေအ
TZA September 3, 2011 at 1:47 AM
နောက်တော့ကျသွားပြီ၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပျော်ရွှင်သော ဘလော့ဂ်ဒေးပါ အစ်မသက်ဝေ :D
T T Sweet September 4, 2011 at 6:09 AM
ဘလော့ဂ်စရေးတဲ့ အချိန်ထဲက ကွန့်မန့်လေးတွေနဲ့ အမြဲအားပေးလာတဲ့ ဘလော့ဂါ စီနီယာ သူငယ်ချင်းကို အမြဲကျေးဇူးတင်လျက်ရှိပါကြောင်း။
စာလေးတွေ၊ အက်ဆေးကောင်းကောင်းလေးတွေ ရေးတတ်လို့ အမြဲလဲ အားကျလျက်ရှိပါကြောင်း။
ပုံနှိပ်ဖော်ပြခံရတဲ့ စာလေးတွေအတွက်လဲ သူငယ်ချင်းအတွက် ဂုဏ်ယူလျက်ရှိပါကြောင်း။
ဘလော့ဂ်ကင်းရင်း စာလေးတွေ ရေးရင်း ပျော်ရွှင်ပါစေဂျာ။